“Nekusingagumi” zvinoreva kuti kunze kwenguva – Saka nei nguva ichitanga uye nguva ichaguma rini?
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » “Nekusingagumi” zvinoreva kuti kunze kwenguva – Saka nei nguva ichitanga uye nguva ichaguma rini?
“Nekusingagumi” zvinoreva kuti kunze kwenguva – Saka nei nguva ichitanga uye nguva ichaguma rini?
Izwi rekuti “nekusingagumi” rinoreva kuti hakuna mavambo uye hakuna magumo.
Hakuna munyika yedu yenzvimbo nhatu inoonekwa (3-D) chinorarama nekusingagumi uye hakuna chinonzi hachina mavambo.
Hupenyu, hunokwanisa kudaidzwawo kuti mweya, hahubatiki saka hunobva ‘kunze’ kwenzvimbo yedu inobatika nekuonekwa.
Nguva haionekwe. Hatizivi kuti nguva chii. Hatigoni kupima nguva. Tinoyera kufamba kwechinongedzo chepachiringazuva pachiso chechiringazuva. Hatipimi nguva. Tinoyananisa chiringazuva nekufamba kwenguva.
Tinogona kufamba tichienda nekudzoka munzvimbo yedenga nenyika (3-D) asi hatigoni kufamba tichidzokera kumashure munguva.
Chero chinhu chatisingaoni kana kunzwisisa chinofanira kuiswa munzvimbo dzepamusoro dzemweya. Saka tinodaidza “nguva” kuti nzvimbo yechina. Nzvimbo yechina iyi inofanirawo kuva musha kumweya yose isingaonekwi yezvakanaka nezvakaipa.
Mweya yemadhimoni inobva kunzvimbo yechina isingaonekwi yakachenjera kudarika isu vanhu, uye ndiyo inotonga nzvimbo yezvematongerwo enyika yakaipa kwazvo. Ndicho chikonzero nei kuine hondo dzisingagumi, ruvengo, nekushaiwa zororo. Hatigoni kuwana mushonga wekurapa nzvimbo yenyika nemuchadenga yatinoti (3D) yezvematongerwo enyika nematambudziko ayo kana achikonzereswa nemweya yemadhimoni enzvimbo yechina (4-D). ndicho chikonzero nei Jesu asina kubvira azvisanganisa munezvematongerwo enyika. Kana Pauro, kunyange zvake akararama nekuuraiwa munguva yekutonga kwamambo Nero, aive kana tichipima mumwe wevaive nehuwori zvakanyanyisa, mhondi uye mudzvanyiriri mukurusa wenguva iyoyo.
MATEO 4:8 Dhiabhorosi akamuisazve pagomo refu-refu, akamuratidza vushe bwose bwenyika nokubwinya kwabwo.
9 Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandimata.
Satani angadai asina kuedza kupa Jesu hushe hwenyika ino dai aive asiye muridzi waho. Saka Satani, kubva kunzvimbo yepamusoro yechina, akangwara kwazvo kudarika isu vanhu uye anotonga zvematongerwo enyika zvese.
Chinhu chimwechete chinonyanya kukanganiswa nemakereke evaKristu mukati mekufamba kwenguva kuzvisanganisa munezvematongerwo enyika.
Tichitaura pamusoro panyamasase (Rusifa).
ISAYA 14:12 "Haiwa, wawa seiko uchibva kudenga, iwe nyamasase, iwe mwanakomana wamambakwedza!
13 Iwe wakati mumoyo mako, `Ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari; ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi okumusoro;
15 Kunyange zvakadaro uchaderedzwa kusvikira paSheori, kusvikira pakadzika pegomba.
Satani akachenjera. Anoedza kwazvo kukwikwidzana naMwari. Anosimudzira chigaro chake pamusoro penyeredzi kana vana vaMwari. Zvinoreva kuti akangwarisa kudarika isu. Ane ruzivo rwakanyanya kudarika rwatinarwo. Kuchengetedzeka kwedu kwega kutaura zvakanyorwa muMagwaro. Sezvakaramba zvichitaurwa naJesu, “Kwakanyorwa kuchinzi ...”. ndizvo zvega zvinokunda Satani.
Mwari akataura kuna Abramu, akazoshandurwa zita kunzi Abrahama achiti:
Nyeredzi dzinomiririra vana vaAbrahama-- maJuda. Asi Jesu aive Mbeu huru yaAbrahama.
Takazvarwa patsva muMweya waKristu, maKristu anova mbeu yemweya yaAbrahama.
Chipikirwa chaMwari kuna Abrahama chaive chekuti mukati mekufamba kwenguva dzemakereke kwaizova nevatendi vazhinji vanotenda muShoko raMwari rakanyorwa vanozopenya senyeredzi pakati penzvimbo ine rima yakapoteredza nyika. Izvi zvese mucherechedzo werima (kushaiwa ruzivo rweMagwaro) kwakaberekwa naSatani mune vasingatendi venzvimbo yechina yakatipoteredza.
Rusifa akamukira Mwari akatadza, Mwari akamudzingira pasi kubva kuDenga achipinda mugomba regehena, kwaari kutonga nhasi uno. Akadzikisirwa kubva pakuva mutumwa mukuru kuva Diaborosi, asi haana kurasikirwa nehuchenjeri hwake. Anoziva kuti anganyengera sei iwe neni.
Tiri kurarama munzvimbo yezvikamu zvitatu (3-D). Nzvimbo yechina yenguva inoshanda “serusvingo” runotimisa kuona zvinhu zviri mberi, zvakare inotimisa kuona zviri munzvimbo dzemweya dzezvakanaka nezvakaipa zvakatipoteredza. Ndiyo nzvimbo yemadhimoni kunoenda mweya yevasina kuponeswa. Tinoidzaidza kuti gomba regehena.
II SAMUERI 22:30 …. Kana ndina Mwari wangu ndichadarika rusvingo
Uru rusvingo ruri pakati pezvenyama nezvemweya. Regai titi, uru rusvingo rwenguva. Nzvimbo yemadhimoni iri munezvemweya. Kuva munzvimbo yechina, madhimoni akasimba kwazvo kutidarika nezvatiri munzvimbo yedu yezvikamu zvitatu.
MARKO 5:2 Zvino wakati abuda mugwa, pakarepo akasongana nomunhu waiva nomweya wetsvina, achibva kumarinda.
3 Uyo waigara mumarinda, kwakanga kusina munhu wakanga achagona kumusunga kunyange neketani.
4 Nokuti kazhinji waisungwa nezvisungo zvamakumbo namaketani asi waidambura maketani nokudashura zvisungo. Kwakanga kusina munhu waigona kumunyorovesa.
Munhu akagarwa nemadhimoni ane masimba emweya anogona kudambura ngetani nezvisungo.
Saka kunofanirawo kuva nenzvimbo yepamusoro yemweya wakanaka, yatinodaidza kuti Denga.
Ndiko kunoenda mweya yakaponeswa. KuDenga kuri pamusoro penzvimbo yechina nekuti kuri kunze kwenguva. (Hupenyu husingagumi zvinoreva kuti hunoenda mberi pasina magumo.) ngatidaidzei Denga kuti nzvimbo yechitanhatu.
Pamusoro peDenga kuna Iye Mwari pachake.
I MADZIMAMBO 8:27 "Ko mukati Mwari ungagara panyika here? Tarira, denga nokudenga-denga hazvingamuringani; ndoda imba ino yandakavaka!
Soromoni mwana waDavidi, haana kukwanisa kuvaka Tembere inokwana kuti Mwari agare mairi.
Asi Jesu, Mwanakomana waDavidi muzvikamu zveMweya, akava nemuviri wemunhu wakagona kugara kuzara kwose kwaMwari.
Saka hakunomunhu, zvisinei nekuti akakura sei kana ane zvipo zvakadii, anogona kutanga kuzvienzanisa naJesu.
Vesainzi vanoti magarakisi edu enyeredzi akapoteredzwa neinonzi dhaki meta isingaonekwi. Uyu mucherechedzo wenyika yerima yezvemadhimoni akapoteredza nzvimbo yedu yezvikamu zvitatu (3-D inoti hurebu, hudzamu nehupamhi) ine kurudziro yenzvimbo yechina isingaonekwi).
Inonzi dhaki meta haina chiedza chainoratidzira. Nzvimbo yemadhimoni haifi yakaratidzira Shoko raMwari. Inogaroshandura, kurwisa, kana kufuratira Shoko raMwari rakanyorwa.
Mumazuva eTestamente yekare rutivi rwegomba rwaive “nemapako” maviri.
Isaya 14:15 yakabatwa panotevera inotaura kuti “Kunyange zvakadaro uchaderedzwa kusvikira paSheori, kusvikira pakadzika pegomba”.
“Bako” rimwechete raive Paradhiso yeTestamente Yekare umo mweya yevatsvene maJuda vakafa vachitenda vakazomutswa, mumashure mekufa kuvigwa nekumuka kwaJesu kuvakafa. Akazovapa miviri yakamutswa yaizovagonesa kukwira kudenga kana naivowo vamutswa kubva kuvakafa.
MATEO 27:51 Ipapo tarira chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka.
Rimwe “bako” raive torongo maigara mweya yevakafa vasingatendi vakamirira mutongo wavo unouya.
EZEKIERI 32:23 Marinda aro akaiswa kumicheto yegomba, boka raro rakakomberedza rinda raro; vose vakaurawa, vakawiswa pasi nomunondo, ivo vaityisa munyika yavapenyu.
Saka nzvimbo yenguva iyi yakavapo sei?
Pakutanga kwakanga kusina nguva.
“Nguva” zvinoreva kuti shanduko dzinoitika, dzinozokonzeresa kuora nekufa.
Hupenyu hwezvinomera hunofa hoita manyowa ezvinomera zvitsva, zvinokura zvosimba, asi zvinozosvika pamuganhu panozopindira kuwora. Iri ndiro denderedzwa renguva.
Nekusingagumi zvinoreva kuti shanduko dzinowanikwa dzisingazotungamiriri pakuwora kana rufu.
Mwari Mweya. Tinogona kufunga pamusoro pemweya usingaonekwe sendangariro dzisingaonekwi.
Mundangariro dzake Mwari asingaonekwi aifunga pamusoro pezano rake rekusika rudzi rwevanhu.
Vanhu vaifanira kugona kuzvisarudzira, kuti avaise pamusoro pemhuka dzinorarama nekuda kwakasikwa kuri madziri.
Asi simba rekuzvisarudzira rinoreva rusununguko rwekusarudza pakati pesarudzo dzakasiyana. Saka vanhu vanogona kugaroda kuzuvisisa pavanopima pakati pesarudzo dzakasiyana-siyana. Kana chivi chikapindira vanoda kuzivisisa kwazvo, vobva vawira muchivi dzimwe nguva. Vanobva vaparadza chakanaka chinorarama nekusingagumi.
Vana vaMwari vaive vagara vari mufungo waive mundangariro dzake, ndicho chikonzero nei takagara tiri chikamu chehupenyu husingagumi maari.
Akationa isu vanhu takazadzwa nekuzvida, hukukutu nekuzvitutumadza.
Mwari angatisunungura sei kubva kuzvinhu zvakaipa izvi otisimbisa sei kuti tikurire zvivi? Nekutirega tichiberekerwa muzvivi nekuona zvakaipa zvazvinouya nazvo. Nekutirega tichikundikana nekudzidza kuzvideredza nenzira yakaoma kwazvo.
Saka Mwari aifanira kufunga pamusoro pevavengi kuti atiumbe, atipe kuzvininipisa, uye atiyedze. Patinoona kuti hatigoni kuzviponesa nekuti kunatsa chinhu chinotikurura kwazvo, tinozotendeukira kuna Mwari saMuponesi wedu. Tichienzaniswa Naye, kuzvikudza kwedu kunoparara uye hukukutu hwemoyo yedu hunopera.
JOHANE 1:18 Hakunomunhu wakatongovona Mwari; chero nguva ipi;
2 Nyika yakanga isina ku­gadzirwa, isina chinhu; rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika; Mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura.
Mwari ari pamusoro pezvinhu zvese. Hatigoni kumutsanangura kuti akaita sei.
Akabva asika Denga senzvimbo yemweya kuti rive musha wemweya yakanaka. Mweya yakanaka yekutanga iyi vaive vatumwa vemweya, akabva avapa miviri yemweya kuti vagare mairi.
Akabva asika nzvimbo yezvikamu zvitatu yenyika yezvinooneka nekubatika. Nenzvimbo dzakadzama dzaive dzakazadzwa nenyeredzi nemapuraneti, uye Zuva redu neMwedzi, ratinoti denga ratinoona.
Akasika nyika akaifukidza nemvura, kure nezuva mvura ikaoma nechando zvekuti nyika yakatanga kuratidzika sebhora rechando-- nguva yechando chakaoma yekutanga (first ice age). Zvino Mwari akabva aendesa nyika pedyo nezuva, chando chikanyunguduka. Pakufamba kwezvigodo zvihombe zvechado, zvakasiya zvakwenenzvera chiso chenyika. Chando chikabva chanyunguduka, nyika ikazadzwa nemvura.
Bhaibheri harina kutaura kuti kusika uku kwakatora nguva yakareba sei. Zvinodaro zvakaita mabhiriyoni emakore.
62-0318 SHOKO RAKATAURWA NDIRO MBEU YEKUTANGA . 1
Kana mukatarisa Mwari achiudza Mosesi pamusoro peBhaibheri, Akataura kuti, “Pakutanga Mwari akasika denga nenyika.” Zvapera! Zvakatora nguva yakareba sei, izvozvo hazvinei nesu. Zvino akabva azotanga kuita nguva yake yekuisa mbeu panyika.
Asi “Pakutanga”, panogona kuva pakaita mabhiriyoni emakore, nenguva refu kwazvo hatizivi.
Ndiyo nguva yazvinogona kuva zvakatora munguva dzedu isu.
Asi pakutanga kwaive kusina nguva, nekuti hakuna chakasikwa chaifanira kuzowora. Zvese zvakabva mundangariro dzaMwari sechikamu chezano rake rekusingagumi. Mwari akataura Shoko rake, rakaratidzira mabasa ekusika aive mundangariro dzake.
Nekuti kwaive kusina nguva pakutanga, Mwari haana kutaura nguva yemabasa ake ekusika. Akangosika zvkadaro.
Zvino nguva yakaita seyakazotanga paakatanga kuisa hupenyu panyika, nekuti pakarepo Bhaibheri rakabva rataura pamusoro peMazuva.
Nguva yaive yabva kupi?
Zvese zvaive zvakanaka pakutanga, kusvikira mutumwa wepamusoro-soro nyamasase Rusifa akasarudza kumukira Mwari. Mwari akabva amushandura kumuita wakaipa, vatumwa vose vakamutevera vakashandurwa kuitwa madhimoni. Mwari akavarasira kunze kweDenga, asizve akabva asika nzvimbo yechina sejere ravo. Jere remweya yaive yagumirwa iyi rinonzi “nguva”. Iyi yaive yakaita kunge keji yaive yakapatsanura nzvimbo yemadhimoni neDenga. Asi nguva ichaguma, Satani nemadhimoni ake ose vachaparadzwa muGungwa reMoto. Zvino keji isingaonekwe yenguva yaive yakatakura mweya yezvakanaka nezvakaipa, yaizoguma kurarama kunyange dai nguva yaizovapo “nekusingaperi-peri”.
“Nekusingaperi” kutsanangurwa kwenguva kunogara kusvika panguva yekunyangarika kwayo. “Peri” zvine chirevo chakafanana. “Nekusingaperi-peri” zvinhu zvenguva refu refu, asi zvinozopera. Iyi ndiyo nguva yakarebesa yatingafunge nezvayo isu vanhu. Izvi zvakasiyana nekuti “nekusingagumi” izvi zviri kunze kwenguva.
Nekusingagumi hakuna kubvira kwatanga, uye hakuzoperi. Saka nekusingagumi inguva yakarebesa. Isu vanhu venyama vakaisirwa miganhu hatigoni kunzwisisa nekusingagumi, saka nguva yakarebesa yatingafunga nezvayo ndiyo “nekusingaperi-peri’. Mabhiriyoni emakore.
Satani akawira pasi achibva kuDenga achiuya munzvimbo yepasi yechina yenguva, inova musha wemweya yakanaka neyakaipa. Tinoidaidzawo kuti gomba regehena.
Musafunge kuti nzvimbo dzemadhimoni kungori nezvakaipa zvega. Anoitawo zvakanaka kuti afadze vanhu. Anoratidzika akanaka achishamwaridzika asi achikuvadza, kuvodza nekuparadza. Fungai nezvanachiremba vanorapa vanorwara kwemakore vachikuvadza vezvemitambo vechidiki. Vatungamiri vanembiri vakanaka vanopa varombo, asi vozokurudzira vateveri vavo kuti vazviuraye.
Madhimoni atora nzvimbo dzezvematongerwo enyika, chinangwa chawo ndechekutora nekunyengera kereke.
Satani akakunda kuita zano rake paakapinda muna Judasi Iskarioti, mudzidzi waJesu.
JOHANE 13:2 Zvino vakati vapedza kurayira, Diaborosi atoisa mumoyo maJudasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni, kuti amupandukire;
RUKA 22:3 Zvino Satani wakapinda kuna Judasi wainzi Iskarioti, mumwe wavanegumi navaviri.
Kuzvisanganisa munezvemari nezvematongerwo enyika kwakaita kuti kereke isaone kunyengerwa kwayakaitwa.
Nguva nomwe dzemakereke dzakatsanangurwa muBhuku raZvakazarurwa. Nguva yekereke yechinomwe Raodikia, ine hunhu hwenguva yekereke yekupedzisira. Raodikia zvinoreva kuti kodzero dzevanhu.
Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodikia uti:
Tsamba iyi yakanyorerwa kereke. Jesu akamira kunze kwemukova wekereke. Saka hakuna kereke inotendera Shoko raMwari rakazara kuti ripinde mukereke. Vanotenda zvimwe zvidimbu zveMagwaro, asi kwete zvese.
Denga riri kunze kwenguva
Nzvimbo yezvikamu zvitatu ine Nyika yaive isina nguva Mwari paaiisa hupenyu paNyika. Kwaive kusina kuwora. Kusina rufu. Nzimbo yechina chete yaive yakatakura madhimoni kana vatumwa vakarasika ndiyo yaive nenguva ichifamba yaizosvika pakupera yakandirwa muGungwa reMoto.
Saka Mwari akaenderera mberi nekuisa hupenyu panyika.
Achiziva kuti vanhu vaizotadza, uye kuti nyika yaizopindawo muhusungwa kwenzvimbo yechina 4-D yenguva nemweya yakarasika, Mwari akatanga kuisa nguva kuzviitiko zvekuti Nyika ive yakakodzera kuti vanhu vararame mairi. Kwaive kusina vanhu saka aisafanira kushandisa mazuva edu vanhu emaawa 24. Mwari akashandisa mazuva ake Iye. Zuva rimwechete raMwari raive rakafanana nemakore 1 000 edu isu vanhu.
II PETRO 3:8 Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu chimwe ichi, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita samakore anechuru, namakore anechuru, sezuva rimwe.
Denga nenyika zvaive kunze kwenguva. Kwaive kusina kuwora. Kusina rufu rwekupedzisira RweGungwa reMoto.
Asi nguva yaifamba munzvimbo yechina. Madhimoni aive atanga kuverengerwa nguva yawo yekunoparara muGungwa reMoto.
Mazuva matanhatu akapera Mwari achiisa hupenyu panyika yaaive asika. Mwari akagadzirisa nyika yaakasika kuti ive musha wakadzikama kuti vanhu vararame mairi. Akabvisa makore aiita pamusoro pemvura kuti chiedza chezuva chirove nyika. Akaita muchadenga mainzi “denga”. Akaunza nyika pamusoro pegungwa. Mbeu yehupenyu hwezvinomera zvikatunga. Akaita kuti zuva ritonge masikati nekuisa nyika panzvimbo yakafanira kubva kuzuva, nekuita kuti nyika itenderere nekufamba kwakafanira. Kutenderera ichinyanya kunonoka zvaizoita kuti kunyanye kupisa masikati. Kutenderera nekukasika zvakanyanya hakuzopisi zvakakwanira.
Akaita kuti mwedzi utonge husiku nekuratidzira zuva. Akatora nyeredzi dzaaive asika pakutanga akadziisa panzvimbo dzakasiyana munzvimbo dzakadzama kuti dziite mapoka enyeredzi dzinozobuda nekunyura munguva dzakasiyana pagore, dzova zviratidzo zvekuratidzira mwaka yakasiyana. Akazadza nyika nehupenyu hwemhuka.
Nekunge asika Nyika nedenga pakutanga, Mwari akatanga kugadzira nekunatsa Nyika kuti vanhu vagogona kurarama mairi. Mumazuva matanhatu aitevera Mwari akagadzirisa zvaaive asika akaita kuti nyika, gungwa nemuchadenga uve musha waizogona kurarama vanhu. Akabva asika munhu sechisikwa chake chakanakisa chehumambo. Kana tikatarisa kumashure, mazuva matanhatu anozoenzana nemakore 6000 emakore evanhu anhasi. Asi nguva yaive isingafambi panyika. Kwaive kusina shanduko dzaizokonzeresa kuwora. Nguva dzaingofamba munzvimbo yechina yemweya yemadhimoni.
Zvino pazuva raMwari rechinomwe (sezvo nguva dzevanhu dzaive dzisati dzatanga) Akasiya mwanakomana waMwari, Adamu, nemwenga wake kuti vabate hushe paNyika kweZuva iroro. Nhasi tinotarisa kumashure tichiona zuva iroro sechuru chemakore kana zvichienzaniswa nemazuva edu.
Mwari paaive akazorora, Adamu nemwenga wake vakaiswa pakuidzwa. Mwari aive avaudza zvekuita uye chakakoshesesa, zvavaisafanira kuita. Asi vakatadza kubatira Mwari kwezuva rimwechete rakazara remakore churu. Imwe nzvimbo mukufamba kwenguva ikoko Diaborosi akapindira.
Vakaterera Mwari here? Mukadzi haana.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Kune kereke inogara ichiita zvakarehwa neBhaibheri zvakazara here nekungoterera Mwari? Kwete. Kereke imwe neimwe inotevera munhu anoitungamirira uye tsika dzayo dzisimo muBhaibheri. Kune masangano anosvika 45,000 akasiyana emasangano emakereke. Ese akasiyana, uye ese anoti ari kugona. Pane chinhu chisina kumira zvakanaka.
Kereke imwe neimwe inoteerera Magwaro mune zvimwe zvinhu, vobva paBhaibheri nemufaro vachinoshandisa mazwi asimo muMagwaro kugadzira dzidziso.
Tarisai pamufananidzo une mbiri uyu wevasikana gumi. Mukadzi mucherechedzo wekereke nekuti kereke yechokwadi ndiye Mwenga waKristu.
4 Asi vakanga vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo
MaKristu ese anowanzozviisa muchikamu chevasikana vakangwara vakazadzwa nemafuta mucherechedzo weMweya Mutsvene, saka vanotenda kuti vanopisa semoto uye vakamuka zvakazara sezvo vachishandira Mwari.
Asi vese vari kupesana nevhesi rakakosha. Rekuti vose nevasikana vakangwara vakarara.
Saka kunyangwe dai makazadzwa nemweya, hamuna kumuka makarara, zvinoreva kuti hapana chamunoziva pane zviri kuitika. Saka masangano emakereke akurira kereke yaMwari, vachiisa vanhu pasi pemutungamiri wekereke netsika dzekereke. Makereke anhasi akanyengereka sezvakaitwa Eva pakutanga.
Vanotenda kuti Eva akadya muchero, akarangwa nemubairo wekuzvara mwana. Kushaiwa ruzivo uku kunoratidza kuti havatozivi chivi chekutanga kuti chaive chii. Miti yese yemichero yakataurwa kuti yakanakira kudya zuva rechitatu. Jesu akataurawo kuti hakuna chinodyiwa nemunhu chingamusvibisa.
Kudya chimwe chinhu hakusvibisi munhu zvakare hachingavi chivi.
MATEO 15:16 Iye akati: Nazvino nemi vo muchigere kunzwisisa here?
17 Hamunzwisisi here kuti zvose zvinopinda mumuromo, zvinoenda mudumbu, zvikazorashwa kunze?
18 Asi zvinobuda mumuromo zvinobva mumoyo ndizvo zvinosvibisa munhu.
Chekudya chinopinda mumuromo hachingave chivi sezvo chisingasvibisi munhu. Asi kutadza kunobva mumuromo ndiko kunosvibisa munhu nekuti inenge iri dzidziso yenhema.
Kudya muchero chaive chisiri chivi kana chikonzero chingaitise kuti Mwari aise rufu pavanhu vese. Muti wese wakanzi wakanaka. Saka Mwari haangaisi chivi chisingaregerereki kuti chakakonzereswa nekudya muchero wakanaka. Unenge uri murairo usina maturo wekuedza kutendeka kwevanhu.
Mwari akati kuna Adamu, “Zvawa ...” akatsanangurira Adamu chivi chake.
GENESISI 3:17 Kumunhu akati, "Zvawakateerera inzwi romukadzi wako, ...
Adamu akagona kunzwisisa zvaaive aita zvakaipa.
Mwari akati kumhuka yakazotukwa ikashanduka kuita nyoka, yaive pamusoro petsoko uye yaifunga, “Zvawa ...” Akabva atsanangura zvayaive yaita zvakaipa.
Chero mhuka yakazoshandurwa ikaitwa nyoka yakanzwisisa kutadza kwayo.
Asi Mwari haana kubvira atsanangurira Eva zvaaive aita zvakaipa. Paakamutonga haana kubvira ati “Zvawa ...”.
Hapana “zvawa ...” akataurwa. Aive anyengerwa zvakazara zvekuti haana kutenda kuti aive atadza. Mwari haana kubvira zvake aedza kumutsanangurira kuti chivi chake chaive chei. Saka Chivi chekutanga chaive chinhu chakadzama kwazvo.
Zvaizova nyore kwazvo kuti Mwari ati, “Ndakakuudza kuti usadye Muchero iwoyo (apura)”. Eva aizonzwisisa izvozvo.
Asi murango wekuzvara mwana? Hauna chekuita nekudya maapura.
Edeni ndiyo yega nguva apo Mwari asina kuudza vanhu kuti vatendeuke kuti zvivi zvavo zvibviswe, dai akadaro zvinhu zvingadai zvakaenda mberi sezvazvaive pekutanga. Saka vaive vaita chivi chaisagona kubviswa. Mwari aizovaregerera nekufamba kwenguva, asi chero iye haana kugadzirisa chakaipa chavaive vaita ipapo.
Tine simba rekuzvisarudzira, asi hatina kusununguka kubva kuzvakaipa zvinokonzereswa nesarudzo dzedu.
Kuvaregerera kuti vadya apura kungadai kwaive chinhu chiri nyore, sezvo pasina chakaipa chaive chaitwa. Maapura haasvibisi munhu.
Asi makereke anoparidza kukanganisa uku nekuti vakavata saka havasi kuziva zvakaitika chaizvo mumunda weEdeni.
Kuturikira kwakaipa uku pamusoro pechivi chekutanga chiratidzo chekusaziva Magwaro kwekereke. Vanoparidza kukanganisa uku uye havatendi kuti vari kukanganisa. Zvinoratidza kuti Diaborosi akanyengera kereke, sezvaakaita paakanyengera Eva.
Saka Diaborosi akapinda mumhuka yakazotukwa kuitwa nyoka, mhuka yepamusoro soro yaive yanano isipo pakati pezvipfuwo nevanhu. Mwari akazotuka mhuka iyi, ikashanduka kuita nyoka. Ndicho chikonzero iri “yanano isipo” pakati pemunhu nezvipfuwo isingagoni kuwanikwa neveSainzi.
Mwari paakatuka Rusifa nyamasase, aive mutumwa wepamusoro-soro, akamuita Diaborosi, Mwari akasika nzvimbo yechina yenguva – sejere (kana keji) kuitira Satani nevatumwa vake vakarasika.
Mwari paakatuka mhuka yakazoshandurwa kuitwa nyoka, ipapo Mwari akabva aisa zvisikwa zvese – denga nenyika mujere kana keji yenguva. Nyika yakava pasi pemiganhu yenguva yenzvimbo yechina, nzvimbo iyi yaive yagara iine mweya yakarasika.
Nyika, nenzvimbo dzinoonekwa, zvakabva zvava muhutapwa munzvimbo yechina yejere re4- D renguva, nekusatenda zvakava pasi peshanduko dzekuwora dzinozobereka rufu. Nguva inotishandura kubva pakuva vaduku vakasimba, kutiita vatana vasinesimba, kusvika tafa.
Nguva inounza shanduko dzinoendesa pakuparara. Hushe hunosumuka hwowira pasi hwonyangarika.
Kubva pakuwira kwaAdamu muchivi mukati mezuva rechinomwe, nyika yaive yakatapwa munguva zvese panyama nepamweya-- yaive yakatapwa mukusatenda kwaSatani kwekushaiwa kutenda muMagwaro. Diaborosi anogaroshandura, kurwisa, nekufuratira Mavhesi eBhaibheri. Mavhesi aasingagoni kutsanangura kana kuti aasingadi kutenda maari anosiiwa achinzi haana kukwanira kana kuti haana kukosha.
ZVIREVO 30:5 Shoko rimwe nerimwe raMwari rakanatswa;
Adamu aifanira kutonga nyika iye nemwenga wake kwechuru chemakore, asi imwe nguva mukati menguva iyoyo vakakanganwa kutenda muShoko raMwari nenzira yavakaritaurirwa naMwari. Vaifadzwa nekutaura kwakachenjera kwairwisa Shoko raMwari. Wakaipa akavakurira akavatapa.
Musatarisire pasi kungwara kwaSatani, sezvo aimbova munzvimbo yepamusoro-soro kudarika yatiri. Saka kuchengetedzeka kwedu kuri pakubata nekutaura zvakanyorwa muMagwaro kwete kuti tiuye nemazano akangwara pakubatira Mwari. Kana tikabva paMagwaro, Diaborosi anotinyengera. Ane mazano akangwara kwazvo. Sekunyengera kwaakaita Eva.
Nyika yedu yakapoteredzwa nenzvimbo yechina. Dzidzo yevanhu yakawedzera mabhomba akaipa akaitwa nevanhu nechefu, ari kutsemura zvidziro zvenzvimbo yechina iyi ichiburitsa zvirwere zvenzvimbo yechina 4-D zvakaita seAIDS, zvekuti hatizviwaniri mushonga unonyatsoshanda munzvimbo yedu yechitatu. Isu vanhu takukwanisa kuzviparadza, nekuti takadzidza zvepamusoro peruzivo rwedu.
Chivi chakaita kuti rudzi rwevanhu rwutapwe mukati menguva, asi avo vaitenda kuna Mwari vakaponeswa kubva kugomba regehena pavakafa, sezvo Mwari akatora mweya yavo akaiisa muParadhiso reTestamente yekare, yaive nzvimbo yakanaka munzvimbo yechina. Ikoko vaizogara kusvika Jesu avaponesa mumashure mekufa kwake.
Enoki akatorwa kuenda kudenga asina kufa. NaEria zvakare. Vakaratidza simba raMwari achatora vatsvene vanorarama kuenda navo kuDenga pakuuya kwake kwechipiri.
Mosesi akafa, asi mutumbi wake wakatorwa kukwira kuDenga, akazooneka makore anoda kukwana 1500 akazotevera paGomo reKubwinya, arinaEria.
JUDASI 1:9 Asi Mikaeri mutumwa mukuru, nguva yaakarwa naDiaborosi, akaita nharo naye pamusoro pemuviri waMosesi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati: Ishe ngaakuraire.
Asi vaisatenda kuna Mwari vakafa, mweya yavo (kana midzimu yavo) yakaburukira kugomba raDiaborosi. Ikoko vakamirira kutongwa vari mukurwadziswa kwemweya. Havachine tariro.
Nzvimbo yechishanu inogona kuonekwa semupata uri pakati peDenga nezvakaipa zvenzvimbo yechina.
Jesu akabva auya kubva kudenga ari Mwana, kuti agovane nesu hupenyu hwedu hwenyika ino.
Akafa Mweya Mutsvene wake ukaburukira kugehena kunokurira Satani ukatora makiyi erufu negehena kubva kwaari.
ZVAKAZARURWA 1:18 naiye Mupenyu; ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nokusingaperiperi; ndinekiyi dzorufu neHadhesi.
Akabva ashanyira akanoparidzira mweya yakarasika mutorongo yaive yamboramba kutenda muna Mwari munguva yeTestamente Yekare. Jesu aiparidzira vaive vakarasika zvachose, achizadzisa kudzikinurwa kwavo.
ISAYA 24:22 Vachavunganidzwa pamwechete, sezvinovunganidzwa vasungwa mugomba, vachapfigirwa mutorongo; zvino kana mazuva mazhinji apfuvura vachashanyirwa.
Achitaura pamusoro paJesu mumashure mekurovererwa pamuchinjikwa, Petro akati:
I PETRO 3:19 mauri wakandoparidzira vo mweya iri pakusungwa,
20 Yakanga isina kuterera kare, panguva iya moyo murefu waMwari uchimirira kugadzirwa kweareka pamazuva aNoa; mukati mayo vashoma, ivo vanhu vasere, vakaponeswa nemvura.
Munzira yekuenda kuNyika Jesu akadarika nemuParadhiso yeTestamente Yekare, akavamutsa mumashure mekumuka kwake iye. Akabva atora vatsvene veTestamente Yekare kuti agokwira navo kuDenga segore rezvapupu pazuva rekukwira kwake kudenga.
MAPISAREMA 68:18 Makakwira kumusoro, mukatapa vatapwa venyu;
Izvi zvinoreva kuti Paradhiso yeTestamente Yekare, uko vatsvene veTestamente yekare vaive vakatapwa, hamuchina arimo saka munogona kugara Mweya Mutsvene. Saka Mweya Mutsvene anogara mumoyo yevatendi vake, zvakare semuvakidzani wedu, Mweya Mutsvene ndiwo wega Munhu akanaka munzvimbo yechina. Munhu mumwechete chete ikoko watinogona kunamata kwaari.
Nzvimbo yechina ndiyo musha wemweya (mudzimu) yevanhu vakafa vasina kuponeswa. (MuMagwaro mudzimu unotaurwa nezvawo semweya wemunhu akafa. Kana tikafa, mweya yedu inobuda mumiviri yenyama. MuChirungu chinoshandiswa neBhaibheri reKing James Vhezheni tine mazwi maviri anoreva mweya, zvichitaura kuti uchiri mumuviri here kana kuti wakabuda mumuviri.)
Chakanakira sungano itsva yakatanga nerufu rwaJesu ndechekuti Mweya yemaKristu akaponeswa yakukwanisa kuenda kudenga kana vafa.
II VAKORINTE 5:8 Tinotsunga moyo vo, tichiti zvirinani tirege kugara pamuviri, kuti tigare kunaShe.
Zvinosuwisa, kuti vasina kuponeswa, vachiri kuenda kutorongo kana vafa.
Zvino tarisai zviitiko zvenguva yekuguma kwenhorondo yekereke. Makore 2000 enhorondo yekere akapatsanurwa kuita nguva nomwe dzekereke. Zviitiko zvenguva yekupedzisira zvinoita sezvinooma zvakanyanya, uye zvinotadza kunzwisiswa zviri nyore nemaKristu.
Garorangarirai, panguva yekupedzisira takarara, uye tiri kushanda naDiaborosi akachenjeresa kwazvo kudarika isu.
RUKA 16:8 Ishe wake akarumbidza mutariri usakarurama, nokuti wakanga aita nokchenjera, nokuti vana venyika ino vakachenjera parudzi rwavo kukunda vana vechiedza.
Chinangwa chaSatani chimwechete ndechekutinyengera. Anoda kufanana naJesu Kuti atore nzvimbo yake.
Jesu ndiye Musoro wekereke.
Saka Satani anoda kunyengera maKristu kuti vaite makereke emasangano (kutaura kusimo muBhaibheri) anotongwa nemunhu anotungamirira, mumwe nemumwe wavo anenge ari (musoro wekereke). Izvi zvakaipa nekuti Jesu ndiye ega Musoro wekereke.
Nemakereke ese aine vanhu vakamira semisoro yawo, Satani anogona kupinda otonga semusoro wemakereke ese emasangano. Satani anotikurira isu vanhu zviri nyore kana tiri muchinzvimbo chisiri cheMagwaro.
Hushe hweRoma hwakaparara, asi hukazomuka hwava kereke yeRoman Catholic nemirairo yayo yakaitwa nevanhu. Zvino kukura kwesangano iri nevanhu vanoritungamirira netsika dzavo nemazano avo zvakabva zvapararira kumasangano akabuda mairi achiti dzidziso dzayo dzakaipa.
Nguva yekereke yekupedzisira yakazadzwa nehunyengeri, kana kuti “nhau dzenhema”.
Kereke yeRoman Catholic izvozvi yakabatana nemamwe makereke iri simba munezvechitendero uye zvemari. Simba ravo rezvemauto richauya munguva inouya kubva kuvadzvanyiriri gumi. Russia iri pasi pehudzvanyiriri hwaPutin. Russia inouraya vaya vaive vasori vayo nechefu yakaipa, zvakapa Putin makore anoda kusvika 22 ari pakutonga, yonyepera kunge yakasununguka uye vanhu vari kurarama mukodzero dzavo. Simba rinon’oresa vanhu.
Paakabvunzwa pamusoro penguva yekupedzisira Jesu akatanga kutaura iri yambiro pamusoro pekunyengerwa.
MATEO 24:4 Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu.
5 Nokuti vazhinji vachavuya nezita rangu vachiti, ndini Kristu, vachitsausa vazhinji.
Zvinhu hazvisi sezvazvinoonekwa zviri.
Kune matutu emhepo isingaonekwi yemweya yemadhimoni yakasunungurwa kuti ipinde kwese kunezvematongerwo enyika uye zvemakereke.
Nguva yekereke yekupedzisira, nguva yekereke yechinomwe yeRaodikia, inotsanangurwa sebofu asi iyo isingazivi. Saka tiri kurarama munguva yehunyengeri. Zvinotyisa kuti Mwari anoti kereke yanhasi yeRaodikia marutsi mumuromo make. Izvi zvinotyisa apo masangano akasiyana siyana nemakereke ese vanoti vari kubatira Mwari muchokwadi chizere.
MaKristu anoramba kupepuka muchinhu chekuti makereke ese ari pakaipa, nekuti hapana kusarudzwa kereke pazvakataurwa muBhaibheri. Nguva yekereke yechinomwe yakatukwa, uye Jesu ari kuuya kumunhu mumwe nemumwe-- kwete kukereke yese. Akamira kunze kwemukova wekereke achigogodza, achizviratidza kune avo vanowana kushinga kwekupokana nedzidziso dzisiri dzeBhaibheri dzinodzidziswa nemapasita avo.
Asi hakuzowanikwi vakawanda vakadaro.
Jesu aive asina chokwadi chekuti achawana vanotenda kuBhaibheri paachadzoka paNyika.
Vatungamiri vemakereke vakapatsanura kereke kuita masangano anosvika 45 ooo akasiyana. Rimwe nerimwe remasangano aya rinoti ndiro rinonatsa (iro chete).
Mwari akavimbisa mutumwa (nhume) munguva yekereke yechinomwe kuti ipedzise kuzivisa zvakavanzika zveBhaibheri, kuti tidzorerwe pakutenda kwekereke yekutanga yeTestamente Itsva.
Johane Mubhapatidzi aive afa kare. Johane haana chaakadzorera kana kuvandudza. Kunamata kwemaJuda muTembere kwaive kwakuda kuparadzwa. Johane akazivisa rubapatidzo rutsva rwemvura ruri rubapatidzo rwekutendeuka. Zvino Johane akaita chimwe chinhu chaive chakanakisa kwazvo: akazivisa Messiasi kumaJuda.
Saka Eria, aive achauya imwe nguva yaizouya, aizodzorera kereke yekupedzisira pakutenda kwekereke yekutanga yemadzibaba mapositora eTestamente Itsva. Kuti aite izvi aifanira kupedzisa kuzivisa zvakavanzika zveMagwaro zvaive zvangoziviswa muchikamu nevamutsiridzi. Chokwadi chaive charasika muNguva yeRima, vamutsiridzi vakadzorera kereke pakuponeswa, kurarama muhutsvene, uye rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Asi kereke yaive ichiri nekusaziva kukuru pamusoro peMagwaro zvekuti vaive vasinganzwisisi.
Bunzai maKristu kuti nei Jesu akanyora muvhu ruviri nemunwe wake, vanopererwa vofuratira nyaya iyoyo. Hazvina zvazvinoreva kwavari. Havakwanisi kuona zviitiko izvi sechidzidzo chakadzana mukukundikana kwemurairo kuita kuti vanhu vave vanhu vari nani. Saka Eria uyu anofanira kuva Mutumwa wechinomwe (nhume) anopedzisa zvakavanzika zveShoko, zvotigonesa kunzwisisa Bhaibheri. Ipapo chete ndipo patinozogona kugadzirira Kuuya kwaShe Jesu Kristu kwechipiri.
Makereke mazhinji anoramba nekufuratira muprofita wenguva yekupedzisira. Vanofunga kuti vachasvika kuna Mwari nenzira yavo, zvisinei nekusaziva kwavo Magwaro, uye zvisinei nekuti vanorwisa mamwe Magwaro. Vanofunga kuti vanoziva zvese, uye havadi rubatsiro rwemuprofita uyu. Kukotsira, kuvarairwa kwavakaita mukusaziva kuti rubatsirwo rwakatumirwa kare.
"Musingazivi ": Kereke yanhasi, saEva, haizivi kuti haina ruzivo zvachose.
Vazhinji vacho vese veavo vanotenda kudzidziso dzemuprofita wekupedzisira anotaurwa naJesu, vanozoenda mberi vonotsiva Magwaro nekuturikira kwavo kwavanoita zvaakataura. Havadi kutevera Magwaro zvakazara ari ega nekuti vanovimba nezvavakabata paitaura muprofita. Navowo vanopererwa panotaurwa pamusoro pemavhesi eBhaibheri akawanda, vasina ruzivo rwezvaanoreva. Semuenzaniso, nei kuna Mateo naMarko kwakaonekwa mutumwa mumwechete mubwiro, apo kuna Ruka naJohane kwakaonekwa vatumwa vaviri? Mucherechedzo wemisiyano iyi ndewei?
Saka maKristu mashoma shoma kwazvo ndiwo anoshingirira kuwana kutenda kwekutanga kwaive nekereke yekutanga.
Asi rimwe zuva Mutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10 achaburuka nenzwi reMutumwa Mukuru kuzomutsa vatsvene veTestamente Itsva vakafa mukati menguva nomwe dzemakereke. Mweya yavo ichadhonzwa kubva kudenga, yoiswa mumiviri yekubwinya isingazowori pano panyika.
Kutinhira kunomwe kwakavanzika kuchareva kuratidza Mwenga anorarama kuti oshanduka sei miviri yavo kuti vakwire kudenga pamwechete nevatsvene vanenge vamutswa, kunosangana naShe kumakore paKuuya kwake kwechipiri. Miviri yavo yakafuka kusawora inenge yakurarama kunze kwenguva. Vanosangana naShe kunze kwenzvimbo yechina. Izvi zvinoratidzwa nekusangana naye mumakore, kwete panyika.
Mumiviri yavo yakafuka kusawora, mwenga anobuda munguva. Havazochembere, havarwari, uye havazofi. Mwenga akabva munguva nomwe anoenda kudenga kwemakore matatu nehafu echirairo chemuchato.
Hakuna shanduko dzinoitika kuvatsvene mumiviri yavo mitsva dzinozokonzeresa kuwora, kuchembera kana rufu. Saka Mwenga waKristu anenge asununguka kubva pahutapwa hwenguva nekuparadza kwayo. Vanenge vasunungukawo kubva kuhusungwa hwekubata kwemweya yemadhimoni.
Jesu anobva abva kuchirairo chemuchato kuDenga achiuya pasi kuzosangana nemaJuda 144,000 vanenge vaparidzirwa naMosesi naEria munguva yeKutambudzika kukuru.
Panopera Chirairo kuDenga, kumashure kwemakore matatu nehafu, Jesu nevatsvene vese kubva muTestamente Itsva neTestamente yekare vanodzoka panyika kuzorwa hondo yeAmgedhoni. Uku ndiko kuuya kwaJesu Kristu kwechitatu.
Chikara nemaprofita enhema vose vanobva vakandirwa muDziva reMoto.
Uku ndiko kutanga kutaurwa kweDziva reMoto, chikamu chekupedzisira chenzvimbo yechina, inosanganisira nguva nemweya yakarasika yerudzi rwevanhu uye madhimoni.
Chikara ndiwo mweya wemasangano ezvitendero wakanyengera vanhu kuti vanamate Mwari maringe netsika dzakaitwa nevanhu. Maprofita enhema ndiwo mweya wehutungamiri hwevanhu mukereke, unotaura kana kuprofita kuti munhu anotungamirira achatungamirira vanhu kuti vagadzirire kudzoka kwaJesu. Saka mutungamiri anenge ari muprofita wechitendero chenhema, chingori hunyengeri hunenge huchitendwa mahuri nevanhu. Vanhu vakasukurudzwa pfungwa kusvika pakutenda kuti kereke yavo ndiyo inogona uye kuti mutungamiri wekereke yavo ndiye munhu waMwari kunguva iyoyo. Mweya uyu unokanganisa hutungamiri hwekereke imwe neimwe, mutungamiri anosimudzirwa zvakanyanya kana muprofita wenhema ndiPope.
Apa Satani anenge asungwa nengetani dzezviitiko zvenguva kwemakore 1000.
Vanokunda paAmagedhoni ndivo vanhu vanotongwa kwemakore chiuru cherugare. Jerusarema ndiro gurukota repasi rese.
Jesu, Mwanakomana waMwari neMwenga wake (kereke yechokwadi) achatonga panyika kwemakore 1000. Izvi zvinozadzisa Zuva rechinomwe risina kupedziswa muEdeni.
Vanhu vakakunda hondo yeAmagedhoni vanotongwa muMereniyamu (makore 1000 erugare) vachiri kurarama munguva. Vachiri kuchembera, vanofa nekufamba kwenguva.
Asi vatsvene veTestamente Yekare nevatsvene veTestamente Itsva vachava mumiviri isingawori yakamutswa kubva kuvakafa kana yakashandurwa saka nekudaro vanenge vari kunze kwenguva.
Pamagumo emakore churu, Satani anosunungurwa kubva pangetani dzezviitiko zvakamusunga. Anokurudzira kumukira kukuru muvanhu vese vachimukira Jesu, izvi zvinorwiswa pahondo yeMagogu. Chero vachinge vararama mumakore 1000 erugare, vanhu ivavo vachangomukira Jesu nehuwandu hwavo. Kuita kwevanhu hakungodi kugamuchira kuda kwaMwari.
ZVAKAZARURWA 20:8 Uchabuda kundonyengera marudzi ose ari kumativi mana enyika, ivo Gogi naMagogi, aavunganidzire kundorwa; kuwanda kwavo kwakaita sejecha regungwa.
Satani anogarovimba neruzhinji kuti akurire. Asi chokwadi chinokurira pamusoro pake, pane chero simba raanaro nevazhinji vake.
Kunobva kwauya Zuva reKutongwa.
Vasina kuponeswa vanosunungurwa kubva mutorongo yavo yemweya vokandirwa muGungwa reMoto.
Vasikana vakarara vakaponeswa, asi vasingabatiri Mwari muMweya nemuzvokwadi, vanokwanisa kuonekwa “munevakafa muna Kristu” vowana nzvimbo dzavo muhurongwa hwaMwari.
Vachapiwa miviri yokubwinya inovagonesa kubuda munguva vachipinda muhupenyu husingagumi. Kunenge kusina Diaborosi kuti vanyengereke. Saka vanenge vakachengetedzeka.
Mwenga ndivo vanhu voga vanokwanisa kuvimbwa naMwari mumakore 1000, nekuti anoziva kuti vakararama neMagwaro havana kunyengerwa nemazano akachenjera.
Ndicho chikamu chikuru chengetani dzezviitiko zvinosunga Diaborosi muMereniyamu yemakore 1000 erugare. Vanhu vachararama neMagwaro zvakazara, kana kuti havazonyengererwi ikoko.
Nhasi Mwari ari kutsvaga Mwenga anotenda nekunzwisisa Magwaro. Vanhu ivavo chete ndivo vanogona kukunda Satani muMereniyamu, saka vanobva vamusungirira kupfurikidza kusatenda maari nekuti vanenge vachitenda kuBhaibheri chete.
Kunobva kwaita kuputika kwegomba reshumba chaiko apo gungwa rinoputika. Izvi zvinorima chiso chenyika zvoparadza hutachiona hwese nehurwere. Zvinobva zvaparadza humbowo hweruzivo rwevanhu rwese. Kunenge kusisina gungwa.
ZVAKAZARURWA 21:1 Zvino ndakavona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuvura; negungwa rakanga risisipo
ZVAKAZARURWA 21:2 Ini Johane ndikavona guta dzvene, Jerusarema idzva, richiburuka kudenga richibva kunaMwari, rakagadzirwa somwenga wakashongedzerwa murume wake.
Guta guru rine chimiro chepiramidhi rinoburuka kubva kudenga kuuya panyika. Iri ndiro Jerusarema Idzva. Chiedza chenyika, Jesu, achava nechigaro chake pamusoro pePiramidhi. Mativi ose epiramidhi achave muChiedza Chake.
Neimwe nzira Denga idzva nenyika itsva zvinobva zvabatana.
Nzvimbo imwechete ichave munguva ndiro Gungwa reMoto, uko vatadzi vanotongwa mukati menguva. Gwenzi raitsva raive muenzaniso wekutsva kwechinhu chisingaparari. Vatadzi vanotsva, vasingaparadzwi, kusvikira kutongwa kwavo kwapera.
Asi kana mutongo wavo wapera, vachaparadzwa zvese bazi nemidzi.
MALACHI 4:1 Nokuti tarirai, zuva rinouya; rinopisa sechoto; ipapo vose vanozvikudza, navose vanoita zvakaipa, vachava samashanga; zuva rinouya, richavapisa, rikasavasiyira mudzi kana davi ndizvo zvinotaura JEHOVA wehondo.
Munhu wekupedzisira muGungwa reMoto ndiSatani. Zvisinei nekuti achatsva kwenguva yakareba sei asi hazvizovi nekusingagumi. Munhu ane hupenyu husingagumi chete ndiye anorarama nekusingagumi. Satani haazovi nehupenyu husingagumi.
Vanhu vose vakanatswa nechipiriso chaJesu vakagamuchidzwa hupenyu husingagumi (Mweya Mutsvene) vanenge vari kuDenga. Hupenyu husingagumi ndiyo yega nzira yekupesana neGungwa reMoto.
Saka kana Satani akatsva akapera, nzvimbo yechina inobva yagumawo kurarama. Zvakaipa zvese zvinenge zvatsva.
Kunenge kusisadiwi nguva nekuti zvinhu zvese zvinenge zvanaka. Kunenge kusisina kuwora.
Satani paachange aparadzwa muGungwa reMoto, nguva haizovipo zve.
Kutonga kwaMwari hakugumi. Vatadzi vasina kutendeuka pavanopomerwa, hakuna anozovanzwira tsitsi pamberi. Ndiko kuvengwa kwakaitwa chivi naMwari.
JUDASI 1:7 Sesodoma neGomora, namaguta akapoteredza, akazvipa kwazvo saivo kuvupombwe nokutevera imwe nyama, akaitwa chiratidzo, akarobwa nomoto usingaoeri.
Moto hautsivi vanhu. Kutsiva chinhu chinobva mupfungwa dzemunhu. Saka ndiyani munhu anenge achitsiva uyu? Anofanira kuva Mwari.
DEUTERONOMIO 4:24 Nokuti JEHOVA Mwari wako, moto unoparadza, naMwari ane godo.
Saka kutsiva kwaMwari pamusoro pezvivi hakugumi. Kana Mwari akaera aramba mutadzi asina kutendeuka, kunenge kusisina kudzokera shure kumutadzi iyeye anenge aramba kutendeuka kubva kuzvivi zvake. Mutongo waMwari pamusoro pechivi haugumi. Haashanduri mafungiro ake.
Hatigoni kuziva zvakazara ruvengo rwuna Mwari pamusoro pezvivi.
“Moto usingagumi” ndiMwari anenge achitsiva zvivi. Nekusingagumi zvinoreva kuti Mwari haazoregi kuvenga kwaakaita chivi. Saka vatadzi vanenge vasina kutendeuka vanoparadzwa. Mwari haazovanzwiri tsitsi.
“Dziva reMoto” rinotsanangurwa richinzi moto unorarama “nekusingaperi”. Inguva refu. Nguva yakareba kwazvo. Asi “nekusingaperi peri” zvinoreva kuti kunozosvika nguva yekuguma kwazvo.
MATEO 25:41 Zvino uchati kuna vari kuruboswe, ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi, wakagadzirirwa Diaborosi navatumwa vake.
MARKO 9:48 Apo pasingafi honye yavo, napasingadzimwi moto.
ZVAKAZARURWA 14:11 Vutsi bwokutambudzika kwavo bwunokwira nokusingaperi-peri; havanezororo masikati novusiku, ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho.
“Nekusingaperi-peri” inguva refu kwazvo yatingafunga nezvayo, asi inozoguma hayo.
Isu vanhu hatigoni kufunga pamusoro penguva isingagumi.
Tinoita setinoona nekusingaperi-peri senguva yakarebesa yacho. Asi muDenga Idzva neNyika Itsva tinenge tane njere itsva nemuonero mutsva uri nani kwazvo. Ipapo tinozogona kuona zvakanaka chirevo chenguva isingagumi.
ISAYA 66:22 Nokuti denga idzva nenyika itsva, zvandichaita sezvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Aya ndiwo makore 1000 erugare paNyika. Haisi nyika itsva isingagumi. Yakafanana nenyika itsva. Yakafanana neNyika itsva nekuti ichararama kwenguva refu kwazvo. Nekure nguva refu kwazvo yerugare yakamboonekwa panyika.
Mwedzi mitsva nesabata zvinoita zvikamu zvekunamata kwevahedheni nevamwe vanokunda muhondo yeAmagedhoni. Vanofanira kuenda kuJerusarema kunonamata Jesu anenge achitonga ari Mambo paNyika, mukati memakore 1000 erugare.
24 Vachabudapo vachindotarira zvitunha zvavanhu vakandidarikira; nokuti honye yavo haingafi, uye moto wavo haungadzimwi; vachava chinhu chinosemesa nyama yose.
"vanhu". Vaviri vavo – chikara nemuprofita wenhema vanokandirwa muGungwa reMoto rinenge richangobva kusikwa. Kurwadziswa kwavo kuchaonekwa nevanhu vose vanopona paAmagedhoni. Iyi inova yambiro kuvanhu vose pamusoro pemubairo wezvivi wakaoma kwazvo.
Vanhu vachakura kubva kurudo nerugare rwekutonga kwaJesu. Uye vachaona zvakajeka kurwadziswa kwevatadzi.
Ipapo vanofanira kubva vaita sarudzo dzavo. Kana makore 1 000 apera, Satani asunungurwa, vazhinji vachamutevera. Izvi zvinoratidza pachena kuti isu vanhu hatina tariro zvakadii pahuranda kuzvivi. SemaJuda ese akadanidzira kuti Jesu aurawe, asi chaaive angoita kwaive kuvaitira zvakanaka.
"Moto wavo haungadzimwi" Zvinoreva kuti hakuna nzira yekudzima nayo Moto uyu. Mutadzi umwe neumwe asina kuponeswa anofanira kubatira nguva yemutongo wake. Hakuna imwe nzira. Hakuna kutapudzwa kwekurwadziswa kwake. Kupona kwavo chete ndeapo pavanenge vatsva zvakazara pamagumo ekurwadziswa kwavo vobva vanyangarika.
Kana mutadzi wekupedzisira asina kutendeuka (Satani) akange aripira nguva yemutongo wake, zvisinei nekuti zvatora nguva yakareba sei, iyewo achaparadzwa zvakazara onyangarika. Ipapo moto usingagoni kudzimwa nemunhu unenge usisina basa unobva wanyangarikawo.
'Honye" Anoreva makonye nehutachiwana hunoparadza miviri yevakafa. Asi vaya vanenge vari muGungwa remoto vachapihwa miviri yekuti vatsve vatambure zvekuti havagoni kuparadzwa neimwe nzira, kusvika nguva yemutongo wavo yaripirwa zvakazara. Ipapo ndipo panozoparadzwa muviri iwoyo wonyangarika. Asi kusvikira mutongo wavo waripirwa zvakazara, hakuna nzira yekuti vari kutongwa vagone kuparadza voga miviri yavo kuti vaite nguva yekutongwa kwavo pfupi. Hakuna anogona kuzviuraya mugungwa remoto. Kunyange vose vanenge varimo vachashuvira kuita izvozvo.
ZVAKAZARURWA 19:19 Zvino ndakavona chikara chiya namadzimambo enyika nehondo dzavo, vakavungana kuti varwe naiye wakanga akatasva bhiza, nehondo dzake.
Idzi ndidzo dzaive hondo dzemuvengi dzakaunganira hondo yeAmagedhoni.
ZVAKAZARURWA 19:20 Ipapo chikara chakabatwa pamwe chete nomuporofita wenhema, wakaita zviratidzo pamberi pacho, zvaakanyengera nazvo vaya vakapiwa chiratidzo chechikara, navainamata mufananidzo wacho. Ava vaviri vakakandirwa vari vapenyu mugomba romoto unopfuta nesurferi.
Ava vaviri, chikara nemuprofita wenhema, ndivo vekutanga kukandirwa mugungwa remoto. Ikoko vanonobata seyambiro kuvanhu vese vanopona pahondo yeAmagedhoni.
Iyi ndiyo njodzi yekupedzisira inosangana nemutadzi anenge asina kutendeuka.
Mumashure maizvozvo, hakuzowanikwe munhu anozova nechikonzero chekupunyuka kana akapikisa Jesu nechero nzira.